कोसँग तपाई काम गर्न चाहानुहुन्छ? | Martech Zone
शुक्रवार, अक्टुबर 2, 2009 शुक्रवार, अक्टुबर 2, 2009 Douglas Karr
मैले गत केही हप्ता अथक प्रयास गरिरहेको छु साँच्चै मेरो व्यापारलाई भूमिबाट हटाउन। दिनहरू नेटवर्कि spentमा खर्च हुन्छन् र बेलुका / सप्ताहन्तहरू मैले गरेको प्रतिबद्धताहरूमाथि खर्च गर्दछन्। यो उत्तम भइरहेको छैन, तर प्रगति गर्दैछ। यो अर्थव्यवस्था मा, म ठीक छु।
बिक्री कोचिंग केहि हदसम्म मद्दत गरेको छ - मलाई मेरो ग्राहकहरु को आवश्यकताहरु को राम्रोसँग बुझ्नको लागि मद्दत गर्न, उनीहरुसंग अपेक्षाहरू सेट गर्न, र द्रुत रूपमा बन्द गर्नुहोस् ताकि चीजहरू बाहिर तान्न वा मलाई ढिलो नगर्न। म द्रुत गतिमा गर्दैछु, किकिन 'बट र नामहरू लिएर। कसैले पनि मेरो साथीहरूलाई भन्दा बढि प्रेरित गर्न मद्दत गरेको छैन, यद्यपि!
आज हामीसँग एउटा थियो ठूलो जीत। व्यवसायको एक जोडी जुन मैले सँगै काम गरिरहेको छु एक सम्भाव्यताको एक टनको साथ एक आशाजनक अवसर बन्द गर्न सहयोग गरे। एउटा ठूलो कम्पनी मसँग केही समयको लागि काम गर्दै छु हाम्रो सामर्थ्य जाँच गर्न र हामी उनीहरूका लागि के गर्न सक्दछौं भनेर हेर्न सानो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। म सँधै आभारी छु।
समाचार सुन्दा मेरा साथीहरू खुशी भए। यो मेरा नजिकका साथीहरू हुन् जसले मलाई यहाँसम्म प्रोत्साहन दिइरहेका छन्, मलाई उत्प्रेरित गर्दै छन्, मलाई समर्थन गर्दै छन्, नेतृत्व प्रदान गर्दै छन्, र मलाई मद्दत चाहिएको बेला त्यहाँ छन्। तिनीहरूले एक को लागी सोधेका छैनन् कट र एक पैसा पनि आशा नगर्नुहोस्। तिनीहरू जान्दछन् कि दोस्रो मेरो चारैतिर जानको लागि पर्याप्त व्यवसाय छ, हामी सँगै काम गर्नेछौं।
अरूले फरक दृष्टिकोण अपनाए। सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा थियो सस्था जो मलाई गहिरो ख्याल राख्छन् कि मलाई तान्नको लागि र किन उनीहरूको उत्पादनलाई बिक्रीमा नपार्छु भनेर प्रश्न गरिरहेछु। म सुरुमा स्तब्ध भएँ, अब म पूर्णतया निराश छु। मैले अन्तिम दशक इन्डियानापोलिसमा व्यतीत गरें कि यी व्यवसायहरूलाई सफल बनाउन, उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा मद्दत गर्न, र उनीहरूलाई हरेक अवसरमा प्रबर्धन गर्न।
मैले तिनीहरूलाई पदोन्नति गरेन किनकि मलाई लाग्छ यसले मलाई केही पैसा कमाउने छ। मैले यो गरें किनभने मलाई कम्पनीहरू सफल भएको हेर्न, धेरै मानिसहरू रोजगारी दिन, र यस क्षेत्रको प्रगति भएको हेर्न मन पराउँछन्। तिनीहरू मेरा साथीहरू थिए, र म आफ्ना साथीहरू सफल भएको चाहन्छु।
तपाई कोसँग काम गर्न चाहानुहुन्छ? के तपाईं आफैंलाई आफैंमा घेर्न चाहानुहुन्छ जो स्कोर राख्नमा व्यस्त छन्, चिन्ता गर्नुहुन्छ कि तपाईं तिनीहरूप्रति कति ?णी हुनुहुन्छ, वा तपाईंले तिनीहरूलाई के प्राप्त गर्न लाग्नुभएको छ? वा के तपाईं ती व्यक्तिहरूसँग काम गर्न चाहानुहुन्छ जसले हामीलाई थाहा छ कि हामी मध्येको जति सफल हुन्छ, हामी त्यति नै लामो समय सम्म बस्नेछौं?
सत्य यो हो कि मलाई प्रमोट गर्न गाह्रो समय हुन गइरहेको छ त्यो कम्पनी अर्को पटक ठिक अवसर आउँछ। मँ बुझ्छु कि उनीहरूले मलाई मात्र 'उनीहरुका लागि "एक उपकरणको रूपमा देख्छन्। त्यो निराशाजनक छ तर म यससँग ठिक छु ... मसँग अरू धेरै साथीहरू छन् जसले आज मलाई खुशी पारे।
म पहिले मेरा साथीहरूको ख्याल राख्छु भनेर निश्चित गर्दछु। ती व्यक्तिहरू हुन् जससँग म काम गर्न चाहन्छु।
राम्रो भन्नुभयो, डग। व्यापार मात्र व्यापार भन्दा बढी छ। यो सम्बन्ध हो।
अक्टोबर 3, 2009 बिहान 4:40 बजे
उत्कृष्ट टुक्रा डग। तपाईंसँग बढी सहमत हुन सकेन।
अवसर अवतरण गरेकोमा फेरि बधाई छ, तपाई र मेरा अन्य साथीहरूलाई जो यसमा थिए। तपाईंको व्यवसाय बढ्दै गएको देख्न पाउँदा धेरै रोमाञ्चक छ! हामीसँग @thebeancup ह्याङ्ग आउट गर्नको लागि कहिल्यै ठूलो नहुनुहोस् (र म कपकेकहरू आउँदै रहनेछु!)
आशा छ यस पोष्टबाट मद्दतको साथ, प्रश्नमा रहेको कम्पनी फिर्ता आउनेछ। सम्बन्धले समय समयमा यस्तो गर्छ।